Ugu Weyn Ee Kalina
Xitaa carruurtu waxay ka warqabaan faa'iidooyinka berry viburnum, inkasta oo maalmahaas ay diyaariyaan shaah miro kuwan ka yar inta badan waqtiyada hore. Warshadu waxay muddo dheer caan ku ahayd ciladihii bogsiiyey, iyo cabitaanka kalin waa qadar gaar ah. Waa maxay waxa dhabta ah ee ku saabsan cabitaankaan iyo sida loo diyaariyo si sax ah jikadaada - waxaad ka akhrisan doontaa maqaalkan.
Sida loo kariyo viburnum sonkorta: goosashada miro yar yar ee jiilaalka
Iyada oo ay sabab u tahay diidmada sare ee heerkulka hooseeya, viburnum si fiican ayaa loo aasaasay dalalkeena, iyo duurka, oo la yaab leh miro kulul, waxaa laga heli karaa magaalada oo dhan. Si kastaba ha ahaatee, cid kasta ogyahay in marka lagu daro muuqaal cajiib ah, midhaha geedka this sidoo kale leeyihiin guryaha badan oo faa'iido leh.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Kalina 2020